'Wal dhabdeen TPLF fi Paartii Eertiraa bulchuu uummata miidhaa jira'-'Celebrity events' - BBC News Afaan Oromoo
'Wal dhabdeen TPLF fi Paartii Eertiraa bulchuu uummata miidhaa jira'-'Celebrity events'
"Nageenyi Eertiraafi Itoophiyaa gidduu jiru ammallee guutuu miti" jedhe dhaabbatni 'Celebrity events'.
Hoogganaan dhaabbatichaa Obbo Abrahaam Gabra Libaanos ibsa miidiyaaleef Kibxata harraa kennanin ifatti hariiroon dippiloomasii biyyootaa lameenii haarayee, lammiileeen walitti adeemuu eegalaniis, ''nageenyi bu'e ammallee guutuu miti'' jedhan.
Obbo Abrahaam Gabra Libaanos "nageenyi amma argame amansiisaa fi guutuu miti. Wanti hanqatu jira" jechuun himan.
Daangaan Humaraa fi Omhaajir ifatti baname
Boombiifi fanjiin naannoo daangaatti awwaalaman akka hin qulleeffamiin kan dubbatan, namootni dhaabbata 'Celebrity Events', "waraanni gama lamaaninu hin kaanee jedhan.
Cufamuun daangaa Itoophiyaafi Eertiraafis sababni hammaachuu walitti dhufeenya TPLF fi Paartii biyya Eertiraa bulchu Adda Ummattootaa Dimokiraasiifi Haqaaf /HIGDAF/ dha" jechuun himan.
Kanaafuu gareelee lamaan araarsuuf waltajjiilee ummataa qopheessuu eegalle kan jedhan hogganaan 'Celebrity Events' Obbo Abrahaam, magaalota Finfinnee, Maqalee fi magaala daangaa kan taate Iroob keessatti mariiwwan uummataa qopheessaa akka turan himan.
Dabalataan "preezidaantii itti-aanaa naannoo Tigraay Dooktar Dabratsiyoon haasofsiisnee jirra 'ummataaf jedhee daangaa Zalanbassaa ce'ee hojjechuuf qophiidha'' nun jedhaniiru" jedhan.
"Gama Eertiraatin immoo akka Adda Uummattootaa Dimokiraasiifi Haqaaf /HIGDAFitti mari'annee isinitti himna nun jedhaniiru" jechuun himan hogganaan 'Celebrity Events' Obbo Abrahaam.
Ammas kanuma bu'uura godhachuun namootaa abbootii amantaa, jaarsolii biyyaa, Abbooti Gadaa, Artiistota, gaazexeesitootafi qaamolee hawaasaa biroo irraa walitti dhufan qabatanii gara Asmaraa deemuf akka jiran himan.
"Deebii Eertiraarraa qabanne erga deebinee boodas gara Maqaleetti deemun hooggansa TPLF walin mari'anna" jedhan.
"Nuti TPLF ykn HIGDAF waan jaalannuuf osoo hin taane ummatni akka fayyadamuuf" kan jedhan Obbo Abrahaam, "furamuun waldhabdee garee lamaanis ummata nagaa dheeboteef furmaata," jechuun himan.
Dhaabbanni 'Celebrity Events' eenyu?
Dhaabbatni 'Celebrity Events' dhaabbata dhuunfaa mootummaas ta'e dhaaba siyaasaa kamiyyuu walin hidhata hin qabne akka ta'e Obbo Abrahaam gaafii gaazexeesitoota irraa ka'eef deebisan.
Deeggarsa maallaqaa namoota dhuunfaa irraa argatun akka socho'us himame.
Haaluma kanaan dhaabbatni 'Celebrity Events' nageenya Itiyoo-Eertiraa irratti hojjechuu erga eegalanii waggoota afurii ol ta'us Obbo Abrahaam dubbatan.
Kanaan duras waltajjiilee uummatni mootummoota lamaan irratti dhiibbaa itti taasisu qopheessaa turuu isaanis himaniiru.
Itiyoo-Eertiraa: Daangaan Humaraa fi Omhaajir ifatti baname